Yaa Nabada Doonaaya, Yaase Nabada Diidaaya? – Rasaasa News
Jun 28, 2010 Yaa Nabada Doonaaya, Yaase Nabada Diidaaya?
* Nabada waxaa diidan cidii dan gaar ah oofsanaysa iyo doqon jecel dilka sokeeyaha, nabada waxaa dooni dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo duulkii wax garan.
Dadweynaha iyo Aqonleyda Somalida Ogadeeniya ayaa marar badan waxay ku celceliyaan, Itobiya nabad way ka keeni kartaa dhulka Somalida Ogadeeniya, waa hadii ay doonayso in nabadai ka dhalato dhulka Somalida Ogadeeniya. Aniguse waxaan leeyahay dadka dhulka u dhashay ee ka shaqeeya Ismaamulka Somalidu nabad way ka keeni karaan dhulka Somalida Ogadeeniya, waa hadii ay daacad ka yihiin in nabadi ka dhalato dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaynu ka warhaynaa in tan iyo xiligii Khadar Macalin Cali uu ahaa Maxaweynaha Degaanka Somalida mar walba la samayn jiray dhalinyaro maleeshiyaad ah oo aan mushaar lahayn oo loogu talo galay kaliya in ay la dagaalamaan ururada dagaalka ka waday degaanka, lakiin dhalinyaradaasi ma ayna lahayn wax xuquuq ah.
Waxaana suurto gal u noqon wayday dawlada in ay dhalinyaradaas xuquuq la,aanta ah keenaan nabad ay kaga faa,iidaysato dawladu, balse dhalinyaradaasi waxay tarmiyeen ururadii dagaalka ku waday dawlada ilaa ay ka gaadhaan heer ay xakamayn waydo dawladu.
Dawladu dib ayey u fikirtay waxayna abuurtay ciidan mushaar iyo xuquuq leh oo loogu yeedhay ciidanka degaanka Somalida Booliska cusub [new police]. Dhalinyaradan oo la siiyey xuquuqda nolosha waxay sameeyeen dadaal muhiim ah, waxayna ilaa xad yareeyeen amaba ay ka saaraan dhulka Somalida Ogadeeniya ururadii dagaalka waday. Waxayna wali isweydiinayaan dhalinyaradu ama dadka aqoonleyda ahi, kolka ay dhamaato xiisada colaadeed ee u dhaxaysay ururada mucaaradka iyo dawlada, maxay ku dambayn doonaan mustaqbalka ciidamadan uu gabalku lee yahay.
Ma ciidanka dawlada ayey ka mid noqon doonaan, mise waxay noqon doonan ciidamo Boolis oo rasmi ah oo gabalku leeyahay, sida uu qorayo dastuurka Itobiya ee federaalka ah?
* Hubaal la, aanta ay qabaan dhalinyarada Booliska Cusub iyo madaxdoodu, ayaa waxay ka muuqataa hawlaha nabad galiyada ee ay ka qabtaan dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dhalinyarada Booliska cusub ayaa waxay u shaqeeyaan sidii dad nabada ka soo horjeeda iyaga oo dadweynaha magaalooyinka iyo miyigaba gacan bir ah ku haya, arintaas oo ay macnaheedu tahay kaca oo raaca ururada dagaalamaya. Dadweynuhu arintaas waxay u fasirtaan in dhalinyarada Booliska cusub iyo madaxdoodu ay ka fikirayaan oo kaliya shaqadooda iyaga oo is leh hadii ay nabadi dhacdo waad shaqo beelaysaan.
Marar badan ayey Booliska Cusub ee degaanku dadweynaha magaalooyinka qaarkood bilaa sabab xidh xidhaan iyaga oo ku eedaynaya in ay xidhiidh la leeyihiin ururada dagaalamaya, ka dibna waxay waydiiyaan lacag. Qiimaha lacagta ee ay ka qaadi jireen xiliyadii hore way ka hoosaysaa mida ay maanta ka qaadaan oo dhan BR 2,000, taas oo aad ugu adag daweynaha.
Arimahan, oo aan aad ugu kuurgalaynayn tan iyo intii ay dhaceen heshiisyada iyo wadahadaladii nabadeed ee ay qaateen ururadii dagaalamayey, ayey dadweynuhu sheegayaan in cadaadiskii uu Booliska cusub ku hayey magaalooyinka iyo miyiga ka sii dar mooyee uusan ka raynin.
Waxaa la sheegay in baaqii ay fidisay madaxda ONLF ee ahaa in ayna cwxo wax dagaal ah qaadin oo ay ku sugnaadaan fadhiisimadooda, maadaama uu socdo wadahadal nabadeed. Lagana codsaday dawlada Itobiya in loola dhaqmo cwxo ee yimaada magaalooyinkii sidii dad nabad qaatay laguna soo simo madaxdoda.
Sida la sheegay saraakiil iyo ciidan ka tirsan cwxo, oo yimid magaalooyinka qaarkood ayey dhalinyarada Booliska cusub ula dhaqmeen sidii dad dagaal lagu qabtay oo kale, waxaana la waydiiyey su,aalo badan [interrogation], taas oo ayna mudnayn. Waxaana lagu qasbay in ay sheegaan dadka magaalooyinka jooga ee la shaqayn jiray, waxaana dhacday in dadkii magaalada deganaa qaarkood la xidh xidhay.
Arintani hadii ay jirto ma aha mid qabata cwxo iyo madaxdooda ku yimid amarka madaxda ururka ONLF. Waxayna arintani caydan u tahay in dhalinyarada Booliska cusub iyo madaxdoodu ayna raali ka hayn nabadgaliyo ka dhacda dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaana arintan xakamaynteeda uu xil balaadhan ka saaran yahay marka kowaad masuuliyiinta Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, mar labaadkana Hogaamiye dhaqameedyada oo loo baahan yahay in ay ka hadlaan, mar sadexaadka xilka ugu dambeeya waxaa uu ka saaran yahay dawlada wadaaga ee Itobiya.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya waxay mudan yihiin nabad iyo sharaf, cidii istidhaahda si xun uga faa,iidayso ama dhibaatee, waxaa xaqiiq ah in ay dhibaatadu isaga ku dambayn sida ku dhacday dhiigmiirtee Jwxo-shiil, oo haatan dhabe la mariyey.
Faalada iyo fikirkuba waxay gaar u yihiin qoraaga